Xavi Oo Runta U Sheegay Usain Bolt: “Waa mid Aan Macquul Ahayn Inaad Noqato Ciyaaryahan” %
Xavi Oo Runta U Sheegay Usain Bolt: “Waa mid Aan Macquul Ahayn Inaad Noqato Ciyaaryahan”
Usain Bolt, ayaa wuxuu dhowr jeer ku celceliyay inuu doonayo noqashada ciyaaryahan kubada cagta dheela, isagoona carabka ku dhuftay inuu doonayo inuu marka uu riyadiisa ka dhabeeyo uu udheelo midkood kooxaha Manchester United iyo Dortmund.
Xavi Hernandez oo lagu tilmaamo mid kamid ah macalimiinta ciyaarta kubada cagta, inkastoo uusan tababare soo noqon ayaa waxaa wax laga weydiiyay sheekada Bolt isagoona cod dheer ku sheegay inay tahay wax aan macquul ahayn inuu Orodyahankaan xidig noqdo.
“Waxaa maanta ka dhigaya kubada cagta mid isbedal leh? Waa tayadda. Marka maxay tahay tayadu? Waa suurta galnimada inaan maamusho waxa aan ku sameyso dad kale, maxaa yeelay waxaad ka dheeleysa madaxa ma ahan lugta oo kaliya,” ayuu usheegay So Foot.
“Waan jeclahay Usain Bolt, waa ciyaaryahan wayn, Jir ahaan qofna uma dhawaan karto. Orod ahaan qofna ma gaari karto,” ayuu hadalkiisa ku daray Xavi.
“Laakiin, anigoo xishmaynaya dhamaan waxyaabaha uu leeyahay, laakiin wax isbedal ah mana keeni karo marka garoonka lagu jiro gaara ahaan kubada cagta,” ayuu raaciyay
“Ma awoodno inaan xoojino xawaaraha maskaxda iyo sirta ciyaarta iyadoo leh awood jireed. Marka waa wax aan macquul aheyn, inuu ciyaaryahan kubada cagta ah uu noqdo,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Xavi Hernandez.
Kabtan Iniesta Oo Si Aan La Filayn Uga Jawaabay Inuu Ka Shalayn Doono Hadii Uu Ka Tago Barca